सुहागरात मनाउँदा छोरीकी आमा संगै रुममा भेटिएपछि…. – Online Nepal
May 11, 2020 2225
एजेन्सी – हाम्रो लागी यौ न आवश्यक छ । धेरैजसो मानिसहरु यौ नसम्बन्धि कुरा गर्दा पनि लजाउने गर्छन् । तर मानवजातिका लागी यौ न आवश्यक कुरा हो । समाजमा यौ नसम्बन्धि निश्चित मापदण्ड हुन्छन् । यौ नसम्बन्धि मापदण्ड समाजपिच्छे फरक हुने गर्छन् । हाम्रो समाजमा एक अर्कामा यौ न सम्बन्धि कुरा गर्न अ’प्ठ्यारो मनिन्छ ।*भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला *
एक कथा वर्णन गरिएको पाइन्छ । जस अनुसार ब्रह्मालाई एक बालकको आवश्यकता थियो । जसकारण उनले तपस्या गरे । तब अचानक ब्रह्माको काखमा एक बालक प्रकट भए । जो रुँदै थियो । जब सो बालकलाई ब्रह्माले रुनुको कारण सोधे ।*भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला *
जब भगवान् ब्रह्माले सृष्टिको रचना आरम्भ गर्न थाले तब उनलाई एक बच्चाको आवश्यक पर्‍यो तब उनले भगवान् शिवले दिएको आशीर्वाद सम्झिए । त्यसपछि ब्रह्माले तपस्याको माध्यमबाट बालक शिवलाई बच्चाको रूपमा आफ्नो काखमा पाए ।*भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला *
Nextसुन किन्ने सोँचमा हुनुहुन्छ ? यस्तो छ आजको सुनचाँदीको बजार भाउ
सीमा बचाउँदा सरकार ढले ढलोस्, नेपाली भूमि फिर्ता गराएरै छाड्छु – प्रधानमन्त्री ओली
म्याग्दी घ-टना बुवाले आमाको ह)त्या गरेपछि ३ छोराको वि-चल्ली ! यस्तो भन्छन छोराहरु (हेर्नुहोस भिडियो)